Productivity တွေ ကျဆင်းနေပြီဆိုရင် – Live the Dream
Productivity တွေ ကျဆင်းနေပြီဆိုရင်
တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်တိုးတက်မှု ရှိပြီလားမေးရင် လုပ်စရာရှိပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မလုပ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ ၊ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ချင်စိတ်မရှိပဲ စိတ်တွေလေလွင့် နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ ဖြေရခက်လှပါတယ်.. ဒီလိုနေလာရင်းက ကြာလာတာနဲ့အမျှ အကျင့်ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကို ပါထိခိုက်လာပါတယ်.. ဒီလို Productivity ကျဆင်းမှုတွေက အလုပ်ခွင်မှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေရော၊ ပညာတွေကို သင်ယူလေ့လာဆည်းပူးနေကြတဲ့သူတွေရော မှာ ဖြစ်နေကျပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Productivity ကျဆင်းမှုက ကြီးမားတဲ့ပြဿနာလားဆိုရင် ဟုတ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ယုတ်လျှော့လာြခင်းနဲ့အတူ အရည်အချင်းမဲ့လာတာ၊ ဆူးမဝင် ဆောက်မဝင် သုံးမရတဲ့သူတွေဖြစ်လာပြီး စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းမှုတွေနဲ့ ကြုံလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု လက်ရှိအခြေအနေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Productivity ကျဆင်းမှုကို သတိထားမိနေပြီဆိုရင် ချက်ချင်းပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်၊ လေ့လာစရာရှိတဲ့ အရာများကို ပြန်လည်အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ပြီး တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့အရည်အချင်းတွေရှိလာစေဖို့ Productivity ကျဆင်းစေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ရပ်တန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်ရပ်တွေကြောင့် Productivity ကျဆင်းစေဖို့ဖြစ်လာရတာလဲ? ဘယ်လို အဖြေရှာဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်နော်….
လူတွေရဲ့အရေးပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်က စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တာသတိထားမိလား? မိသားစုအရေး၊ အချစ်ရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး စသည်ဖြင့် အဖက်ဖက်အဆင်မပြေမှုတွေကို အတွေးတွေထဲမှာ အမြဲတမ်းနေရာယူတတ်သလို မိမိရဲ့အလုပ်ချိန်၊ စာလေ့လာနေချိန်တွေမှာတောင် စိုးမိုးတတ်တာကြောင့် Productivity ကျဆင်းဖို့အကြောင်းဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာရုံစိုက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေမှာ မိမိရဲ့ပူပန်စရာအရေးပေါင်းစုံကို ခေါင်းထဲက နေထုတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မဖြစ်မနေမှ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကို အေးဆေးမှလုပ်မယ်ဆိုပြီး ပျင်းလို့အချိန်ဆွဲခြင်းတွေ၊ အခွင့်အရေးပေးရင်ပေးသလို ရေသာခိုတတ်တာတွေက မိမိရဲ့ တစ်ရက်တာ တိုးတက်ရမယ့်စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို လျှော့ကျစေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Productivity တိုးတက်ဖို့က မိမိသာတာဝန်ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်မလုပ်ပဲ အချိန်ရွေ့တာ၊ တစ်ခြားသူအကူအညီယူတာ၊ အပါးခိုတတ်တာဆိုရင်တော့ Productivity ကကျဆင်းနေဦးမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ရေသာခိုတတ်တဲ့ စိတ်လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ပြင်ဆင်လိုက်ပါနော်.
ဒီမေးခွန်းအတွက် Productivity ကျဆင်းနေသူတစ်ယောက်ရဲ့အဖြေက….အားလပ်ချိန်တွေမှာ Social Media နဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်.. Game တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာတစ်ခုမှာ လူနှစ်ယောက်ရဲ့ Productivity ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ချင်ရင် သူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်တွေမှာ ဘာလုပ်တတ်လဲဆိုတာကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒီတော့ မိမိရဲ့အားလပ်ချိန်၊ အားလပ်ရက်လေးမှာ Games တွေ၊ Social Media သုံးတဲ့အချိန်အစား မိမိရဲ့ Skills တွေကို မြှင့်တင်စေနိုင်မယ့် လေ့လာသင့်တဲ့အရာတွေကို ထပ်တိုးလေ့လာရင် Productivity ကောင်းမွန်မှာ ဧကန်မုချပဲမဟုတ်လား..? ဒါ့ကြောင့် Productivity ပိုမိုကောင်းမွန်ချင်ရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ချိန်တွေမှာ ဘာလုပ်တတ်လဲဆိုတာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး ပြင်ဆင်ကြည့်ပါနော်…
၄။ နှောင့်ယှက်မှု များနေလား
တစ်ခုခု လုပ်တာ အာရုံကျနေတုန်း တိန်… Messenger က message ဝင်လာပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေက လာပွားနေပြန်ပြီ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတင်းတုတ်တာကို ကြားမိသွားပြီ.. ဒီလူ ခံနိုင်ရည်မရှိတော့ဘူးလေ… လုပ်နေတဲ့အလုပ်က အာရုံပျက်ပြားသွားရင် အစပြန်ဖော်ယူနေရတော့ အချိန်ကြာသလို လုပ်နေရင်းတန်းလန်းအဆက်ပြတ်သွားပြီး ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားရင် အချိတ်အဆက်မမိတော့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အာရုံပျက်ပြားစေတဲ့အနှောင့်အယှက်တွေက မိမိနဲ့အဝေးမှာ ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုအနှောင့်အယှက်မျိုးတွေနဲ့ဝေးဝေးနေနိုင်လေ ကိုယ့်ရဲ့ အာရုံမပျက်လေလေ Productivity ပိုမိုကောင်းမွန်လေလေဖြစ်ပါတယ်။
၅။ တစ်ခုတည်း အာရုံစိုက်ပြီလား
တစ်ချိန်ထဲမှာ အလုပ်နှစ်ခု သုံးခု လုပ်လို့ Productivity တက်လာမယ်လို့ထင်ရင်တော့ မှားနေပါတယ်။ ထင်းတစ်စည်းလုံးကို တစ်ခါထဲချိုးခြင်းထက် တစ်ချောင်းချင်း ချိုးတာက ပိုသက်သာ ပိုထိရောက်သလိုပေါ့.. လုပ်စရာရှိတဲ့အရာတွေကို လောဘမကြီးပဲ စိတ်အေးအေးနဲ့ တစ်ခုချင်းစီကို အာရုံစိုက်လုပ်ခြင်းက ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်လုပ်၊ အာရုံများပြီး ဘာတစ်ခုမှ ကောင်းကောင်းမပြီးစီးခြင်းထက် ပိုပြီးသာပါတယ်။ မိမိရဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ လုပ်စရာတစ်ခုချင်းစီကို Deadline သတ်မှတ်ပြီး တစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ဆောင်သွားပါ..ပိုပြီး Productivity ကောင်းပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ နှစ်ခုသုံးခု လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ခြွင်းချက်ပေါ့.. ဒါပေမယ့် အာရုံများပြီး Productivity မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ မင်မင်ပြောသလို တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုကို အာရုံစိုက်ပါနော်.
၆။ Break Time
တစ်ခုခု ကို လုပ်နေရင်းနဲ့ အာရုံမပါလည်း မနားပဲ ဆက်တိုက်လုပ်မိနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်လား။ ဦးနှောက်ထဲစာမမှတ်နိုင်လည်း စာအုပ်ကို ငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေတာမျိုး၊ ကွန်ပြူတာ Desktop ကို မျက်လုံးကြောင်ကြောင်နဲ့ထိုင်ကြည့်မိတာမျိုးတွေ၊ ဘာလုပ်လို့လုပ်မှန်းမသိ ဟိုစာအုပ်လေးဖွင့်လိုက်၊ ဒီစာအုပ်ဖွင့်လိုက်နဲ့ အာရုံမစိုက်နိုင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကျိုးမရှိလည်း ခိုင်းမိတာမျိုးတွေပေါ့။ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကွဲပြားနေသလို လူတစ်ယောက်ထဲမှာတောင် နေ့နဲ့ည အာရုံစိုက်နိုင်ပုံခြင်းကွဲပြားတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းအပေါ်မူတည်ပြီး Break Time တော့ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက Productivity ကောင်းဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်. ဦးနှောက်ရဲ့လက်ခံနိုင်စွမ်းကျော်လွန်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ယောင်တောင်တောင်လုပ်မနေပဲ လမ်းထလျှောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့ဦးနှောက်ကို အနားပေးပြီး လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှ လုပ်စရာအလုပ်တွေကို ပြန်ပြီး အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်တာက ကြောင်တောင်တောင်လုပ်နေခြင်းထက်စာရင် Productivity ပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်..ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းအတိုင်းအတာနဲ့ လိုအပ်မယ့် Break Time ကို ချမှတ်လိုက်တော့နော်…